रूपमा मूल बुझे "दर्शन": परिभाषा, इतिहास र रोचक तथ्य
समाचार र समाज, दर्शन
दार्शनिकहरू को बयान आज प्राचीन सान्दर्भिक रूपमा तिनीहरूले दुई थिए र आधा सहस्राब्दियों पहिले रूपमा। यो दुनिया देखि साँच्चै सधैंभरि, सानो वा तिनीहरूले ध्यान जो सत्य परिवर्तन भएको छ भनेर अर्थ राख्छ? यदि सडक मा एक साधारण मानिस आफैलाई प्रश्न सोध्न, र म दर्शन बुझ्न रूपमा, त्यसपछि, सम्भवत, त्यो प्राचीन Sages सम्बन्धित गरिनेछ यो शब्द, यो त पुरानो छ।
वास्तवमा, दार्शनिकहरू सबै उमेरका बस्थे छ, र तिनीहरूले आधारभूत प्रश्नहरू, उदाहरणका लागि, अस्तित्व को प्रकृति र जीवनको अर्थ बारे, जवाफ त पनि भेटिएनन्, 21 औं शताब्दीमा छ।
सोचाइ प्रक्रियाको मूल्य
- बुद्धि phileo, जसको अर्थ प्रेम गर्न, र सोफिया: हामी धेरै मूल बारी भने, अवधि दर्शन आधार दुई ग्रीक शब्द आधारित छ। तसर्थ, दर्शन मूल बुद्धि प्रेम, तर एक व्यक्ति र सम्पूर्ण समुदाय रूपमा बुझे थियो:
यो विज्ञान को हृदय सोच छ मा, एक विश्वास वा भावना सिक्ने छैन केहि।
दर्शन एक व्यक्ति द्वारा सत्यको बोध को परिणाम छैन, यो बारेमा सामूहिक सोच छ। पुरातन विचारक आफ्नो सिद्धान्त अगाडि राख्नु मा, त्यो त तथ्य प्रमाणित भएको थियो जो, र वास्तविकता यो अरूलाई सोच्न, कहिलेकाहीं यो विवाद छ, र सत्य जन्मिएको छ थाले।
यसलाई कसरी शुरू दर्शन बुझ्न बुझ्न, इतिहास तल्लीन गर्न आवश्यक छ। यो कुराको सार सत्य हासिल गर्न एक उपकरण रूपमा देखेको थियो। प्राचीन समयमा मानिसहरूले मन को सबै घटना र तिनीहरूलाई वरिपरि संसारमा सम्बन्ध ढाक्न गाह्रो भएको छ। केही विशिष्ट खण्ड उदाहरणका लागि, तत्संबंधी हेर्ने, ज्वार, तिनीहरूले चेतना, प्रकृति अध्ययन को अनुभव संग भर्नु विस्तार गरेको छ।
unconditioned सहज क्रिया व्यवहार सुरुदेखि उहाँमा निहित थियो कि विचार प्रक्रिया, होमो Sapiens गरे। उदाहरणका लागि, गर्म मा आफैलाई बाल्न छैन मानिसहरूलाई कुरा छैन, र instinctively आगो देखि आफ्नो हात खींचती।
कार्य र भावना बीच प्रतिक्रिया ढिलाइ बेला कसरी सुरक्षित वा थप गर्न लाभदायक बारेमा सोच द्वारा भरिएको, यो दार्शनिक दृष्टिकोण को देखाउनुभएको छ।
प्राचीन को दार्शनिकहरू
पहिलो, पूर्व-philosophic अवधिको व्यावहारिक दैनिक जीवनमा सम्पर्कमा रूप मा, संस्कृति को एक विशेष खण्ड थियो। उदाहरणका लागि, कन्फ्युसियस शासन अनुसार, समाजमा व्यवहार कसरी सिकाउनुभयो: तपाईंले तिनीहरूलाई तपाईं के गर्न चाहनुहुन्छ के थियो छैन अरूलाई निम्ति के छैन। यी बुद्धिमानी मानिसहरू भारत पनि प्राचीन चीन मा मात्र बस्ने, तर।
यी मानिसहरू भनिन्छ गर्न सकिँदैन दार्शनिकहरू, तिनीहरूले thinkers छन्। आफ्नो बयान अध्ययन, यो मूल समय को मान्छे को दर्शन बुझेका रूपमा एक विचार गठन गर्न सम्भव छ।
545 ई.पू. - को 625 मा बस्ने पहिलो वास्तविक दार्शनिक Thales छलफल। ई। सबै आफ्ना भन्दै - यो पानी को सार छ, यो यस्तो पौराणिक कथाहरु रूपमा अन्य स्रोतबाट, भर छैन, कारण मात्र काम छ।
यो विषय सम्झँदै यो कुरा को प्रकृति को आफ्नो पर्यवेक्षणका मा केवल आधारित र आफ्नो सिक्ने को गुण व्याख्या गर्ने प्रयास भएको थियो। सबै चेतन र inanimate प्रकृति को मूल कारण पानी छ भन्ने तथ्यलाई उहाँले, अन्तमा यसको फरक अमेरिका अन्वेषण: ठोस, तरल र महामण्डल।
चेलाहरू र Thales अनुयायी यसरी जो बिना त्यहाँ हुनेछ जसले कुराहरू र घटना संख्यात्मक ढाँचा को विशाल संख्या पाउन दुई पटक वा पाइथागोरस, प्रविष्ट नै नदी मा असम्भव छ भनेर विश्वास गर्ने कुनै Heraclitus, विचार को पहिलो स्कूल को जग, बिछाउने, आफ्नो शिक्षक को विचार विकास गर्न छोडेनन्।
प्राचीन को दार्शनिक विद्यालय सबैभन्दा उल्लेखनीय प्रतिनिधिको सुकरात र प्लेटो, अरस्तू र Epicurus, Seneca छन्। तिनीहरूले ई.पू. बस्थे, तर चासो र आधुनिक मानिसहरूलाई समान प्रश्नहरूको जवाफ देख थिए।
मध्य युग को मुख्य शिक्षाले चर्चलाई को dogmas थिए, त्यसैले यो अवधिको दार्शनिकहरू को मुख्य काम सृष्टिकर्ता अस्तित्व को प्रमाण खोज्नको लागि थियो।
दर्शन मूल बुद्धि प्रेम र वैज्ञानिक विचार को पूर्ण पतन समयमा प्रतिबिम्ब र प्रकृति को अवलोकन, प्रक्रिया मार्फत सत्य लागि खोज रूपमा बुझे थियो पछि, यो लगभग पदावनत छ।
मध्य युग को एक लामो र गाढा अवधिमा सबै भन्दा प्रसिद्ध thinkers वा चर्च सम्बन्धित वा उनको हुनेछ, दर्शन देखि जो अस्वीकार्य छ पालन, थिए - विचार कुनै पनि dogma निःशुल्क बाइन्डिङको मद्दत संग संसारको ज्ञान को एक विशेष फारम।
समय को सबै भन्दा चिरपरिचित thinkers:
Avgustin Avrely, एक treatise "परमेश्वरको शहर", जसको विचार क्याथोलिक चर्च बनाउदा embodied थिए लेखे गर्ने।
Foma Akvinsky faiths को tenets छाँटकाँट गर्न व्यवस्थित कि Aristotelian विचार आयोजित।
समय को दार्शनिक विवादहरु को मुख्य क्षेत्रहरु कुरा वा विचार र दिशा को मुद्दहरुलाई थिए - Theocentricism।
यो अवधिको मुख्य उपलब्धि बारी मा, विज्ञान, कला, साहित्य र नवीनता को एक फूल गर्न नेतृत्व जो, धर्मको प्रभाव देखि मान्छे को मन को क्रमिक मुक्ति हो।
के मूल पुनर्जागरण को दर्शन गरेर चाहनुभएको थियो पुरातन anthropocentrism आधारित थियो, मानवतावाद को विचार को फिर्ती भनिन्थ्यो। मानिस ब्रह्माण्डको केन्द्र बन्नेछ, र अध्ययन सामने आउँछ। उदाहरणका लागि:
Pico डेला Mirandola अस्तित्व कम स्तरमा गिरावट, वा आफ्नो प्राण को इच्छा उकास्न: सृष्टिकर्ता यो हुन कसरी चयन गर्न निःशुल्क मानिस सिर्जना गर्ने दावी।
Erazm Rotterdamsky सबै परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने विश्वास, र सबै कुराको बाह्य नियन्त्रण, सिर्जना एक प्रकारको अस्वीकार गरियो।
Giordano ब्रुनो दुनिया को अधिकता को अवधारणा लागि खम्बा मा कार्यान्वयन भएको थियो।
समय को thinkers कारण, यो प्राचीन मा मूल बुझे दर्शन रूपमा देख्न सकिन्छ, र यो समीक्षा कि गरिएका र पुरातन Sages को शिक्षा संशोधित सुविधाहरू कसरी परिवर्तन भयो।
को सत्रौँ शताब्दीमा विश्व कडा भविष्यमा मानव विचार को विकास प्रभावित गर्ने ठूलो दार्शनिकहरू एक सम्पूर्ण आकाशगंगा दिनुभयो।
दर्शन मूल बुद्धि प्रेम रूपमा बुझे भने, अब आगे ज्ञान र यसको व्यावहारिक आवेदन गर्न आउँछन्। को empiricists र rationalists: समय को thinkers दुई शिविरमा विभाजित थियो। पहिलो समूह:
Frensis Bekon, ज्ञान, शक्ति छ भनेर मानिसहरू विशेष देखि सामान्य संसारमा अध्ययन गरेर पूर्वाग्रहको र धार्मिक अवधारणाहरु को हटाउनु मौका दिने दावी गर्ने।
थोमस Hobbes ज्ञान को आधार अनुभव, प्रकृति संग अर्थात् सम्पर्क र सचेत मार्फत आफ्नो धारणा हुनुपर्छ भन्ने लाग्यो।
Dzhon Lokk त्यहाँ मानव मन छ कि धारणा थियो उहाँको भावना मा मूल गरिएको छ भनेर केही छ। यो एक व्यक्ति को अर्थमा सिक्छन् मार्फत, यसको प्रकृति बारे सोच्छ र वैज्ञानिक निष्कर्ष बनाउन छ।
Empiricists संसार र एक व्यक्तिको जीवन को अवस्था को प्रभाव बुझ्न भावना भर गर्न peculiar थियो।
empiricists नभई rationalists उदाहरणका लागि एउटा फरक राय, छ:
त्यसैले म अवस्थित, मलाई लाग्छ: Rene Dekart मौलिक थियोसिस व्यक्त गरे। यो भनाइको तात्पर्य मात्र वास्तवमा भन्ने मानिस भनेर - एक सोचाइ, आफ्नो अस्तित्व को तथ्यलाई द्वारा निर्धारित। मानव चेतना को विकास मा महत्वपूर्ण भूमिका बारे हामी विचार कसरी आफ्नो बयान प्ले छ, र यो हाम्रो जीवन हो। उहाँले पहिलो अभिन्न छ कि सामाग्री तर पनि आध्यात्मिक सिद्धान्त मात्र होइन आधारित छ जो संसारको duality बारेमा कुरा।
Benedict Spinoza सबै कुराको आधार जो देखि सबै देखिने र नदेखिने दुनिया देखा पदार्थ एक प्रकारको छ, कि विश्वास गरे। तिनीहरूले जो सृष्टिकर्ता प्रकृति संग पहिचान गरिएको थियो वास्तविकता को तस्वीर, को सिद्धान्त अगाडि राखे।
प्राण - Gotfrid Vilgelm Leybnits प्रत्येक व्यक्ति एक अद्वितीय Monad छ जसमा monads को सिद्धान्त, सिर्जना गरियो।
को 17 औं सताब्दी को वैज्ञानिकहरू को सिद्धान्त को उदाहरण मूल बुझे रूपमा देख्न सकिन्छ दर्शन (प्रेम प्राचीन को बुद्धि), र त्यो बाँकी मानव सोचाइ के स्तर।
को 18 औं शताब्दीको दार्शनिकहरू
ज्योतिको उमेर जहाँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण बौद्धिक युद्धमा बाहिर जस्ता अवधारणाहरु बीच गरियो नयाँ दार्शनिक विद्यालयहरूको दयालु जन्म दिए भौतिकवाद र idealism। विशेष प्रसिद्ध समय को ठूलो thinkers बीच:
निरपेक्ष monarchical शक्ति र मानिसहरूको मन मा चर्च को प्रभाव एक प्रतिद्वन्द्वीको थियो VOLTAIRE। उहाँले कुनै परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने तर्क गर्ने निःशुल्क-विचारक, थियो।
Zhan Zhak Russo सामाजिक स्थिति अनुसार मान्छे को विभाजन गर्न नेतृत्व जो राज्य, को कारण बनेको प्रगति र सभ्यता को एक आलोचक थियो।
डेनिस Diderot materialists प्रतिनिधित्व थियो। यो कुरा गति, को अणुहरु सार्न जो छ - उहाँले सारा संसार त्यस विश्वास गरे।
Immanuel Kant, त्यसको विपरीत, एक idealist थियो। त्यसैले उहाँले अगाडि राख्नु र दुनिया दुनिया कुनै शुरुवात भएको, सुरुवात र एउटा विपरीत छ कि सिद्धान्त साबित भयो। दार्शनिक विरोधाभास - उहाँले आफ्नो antinomies लागि प्रसिद्ध छ।
दर्शन मूल बुद्धि र विचार स्वतन्त्रता प्रेम रूपमा बुझे थियो भने, 18 औं शताब्दीको ज्ञानोदय यसबारे बुझ्न मानव मन बाहिर यसलाई ल्याए।
को 19 औं शताब्दीको दर्शन
सबैभन्दा हडताली दार्शनिक निर्देशन, यो विज्ञान को पछि विकास प्रभावित positivism जो थियो Ogyust Kont संस्थापक थियो। उहाँले सबै आधार मात्र सकारात्मक ज्ञान, एक experimentally उत्पन्न अनुभव आधारित हुनुपर्छ भन्ने विश्वास गरे।
दर्शन सामान्यतया उहाँलाई प्रतिबिम्ब को मद्दतले संसारको एक मानिसको ज्ञान आधारित सिद्धान्त रूपमा वर्णन गरिएको छ भने, Conte को सबै ज्ञान को आधार तथ्य द्वारा ब्याक हुनु पर्छ रूपमा अब आवश्यक छ। आफ्नो सिद्धान्त पहिले नै 20 औं शताब्दीको दर्शन नयाँ दिशा को विकास को लागि गति भयो।
20 औं शताब्दीको दर्शन
कार्ल Popper विज्ञान र दर्शन पहिलो अवधारणाहरु साझेदारी। अघिल्लो शताब्दीमा, त्यहाँ यस सन्दर्भमा मा thinkers बीच विवाद भए, त्यसपछि, Popper अन्तमा दर्शन एक विज्ञान, र दुनिया बुझ्न यसको आफ्नै तरिकामा peculiar छ संस्कृति को एक विशेष प्रकार, छैन भन्ने साबित भयो।
आज, यो संस्कृति सबै क्षेत्रहरू मा penetrated छ। त्यहाँ कला, धर्म, इतिहास, राजनीति, अर्थशास्त्र, आदि को एक दर्शन छ
गर्दा अनि संसारको दृश्य
20 औं शताब्दीमा यो देखा पर्नुभयो र worldview को लोकप्रिय अवधारणा भयो। को दर्शन त्यो मनपर्ने सजग हुनुपर्छ कसरी व्याख्या गर्न जान्न:
सुरुमा, यो संसारमा निरन्तर विभिन्न घटना र सबै यो भरिन्छ कि बारे सोच द्वारा हुनुको ज्ञान थियो।
अर्को चरण - मानिसको अध्ययन र वास्तविकता मा आफ्नो ठाउँ।
यस पछि चरण - वैज्ञानिक ज्ञान को विकास, छुट्टै अनुशासन रूपमा दर्शन निर्धारण।
को अध्ययन संसारको अंश मात्र, एक पुरा रूपमा कल्पना गर्न सक्दैन भन्ने तथ्यलाई कारण कुनै विज्ञान। यो उपलब्ध मात्र दर्शन छ, त्यसैले यो एक विज्ञान छैन, तर यो उनको सर्वश्रेष्ठ ज्ञान लिन र तिनीहरूलाई संसारको तस्वीर बनाउन सक्छ।
व्यक्ति को सार
सबै समय मा, मानव जीवन र आफ्नो उद्देश्य को अर्थ रुचि दार्शनिकहरू। आज यी विभाग प्राचीन को Sages भन्दा बढी ज्ञात छ, तर निश्चित जवाफ अझै कुनै एक पाए। त्यसैले दर्शन सम्पूर्ण शरीर मा विश्वव्यापी को एक microcosm रूपमा मानव अध्ययन जारी छ।
Irrationalism - अज्ञात एक दर्शन
Nihilist - एक cynic वा निराशाजनक मानिस?
Tommaso Campanella, आफ्नो जीवन र कार्य
नव-Platonism - यो के हो? नव-Platonism को दर्शन
आउटलुक - विश्व एक दृश्य
सानो मातृभूमि - यो Patriotism को गठन को लागि एक महत्वपूर्ण तरिका हो
घरमा क्यान्ड सिमी रूपमा? billets फलियां
भिन्नता भुक्तानी आफ्नो लाभ।
शुरुआती लागि पौडिरहेका लागि प्रशिक्षण कार्यक्रम
अद्यावधिक "सुजुकी IGNIS '2013 लामबद्ध
"मृत्यु को मरुभूमिमा।" कार्य श्रृंखला अभिनेता आधारभूत संरचना
प्रेममा मान्छे कसरी स्वीकार गर्न।
गालापागोस टापुहरू: एउटा यात्रा संसारको रहस्यमय कुना मा
रुस्लान Provodnikov - साइबेरिया देखि puncher
इन्जाइम - शरीर मा जीव रसायन प्रक्रियाहरू को एक उत्प्रेरक
नरिवल: क्यालोरी र लाभ